“Dastuurku keliya kuma xirnayna Wasaaradda Dastuurka” – Kalfadhi
“Dastuurku keliya kuma xirnayna Wasaaradda Dastuurka”
December 4, 2019 Hassan Istiila
Wasiirka dastuurka Mudane Saalax ahmed Jaamac ayaa bogaadiyay sida maamulka gobolku ay waqtigooda usiinayaan arrimaha masiiriga ah ee dalka gaa rahaan Dastuurka.
“Dastuurku ma ahan wax wasaaradda dastuurka kaliya kuxiran balse waa waxyaabo 80% quseeya hay’adaha Dowladda ee kala duwan, waana in ay aragti kakeenaan aagaga ay hay’ad walba ku howlantahay, tusaale waa in wasaaradda caafimaadku ay aragti ka keentaa sida loo maamulayo caafimaadka, waxbarashada sidoo kale waana in ay ku salaysnaataa cilmibaaris” ayuu yiri wasiirka Dastuurka mudane Saalax Ahmed Jaamac.
Wasaaradda Dastuurka aya wada howlo muhiim ah Arrimaha Dib-u-eegista Dastuurka waxayna kulamo shaqo oo badan horey ula yeelatay, lana yeelan doontaa hay’adaha kala duwan ee dowladda kuwaa oo udub dhexaad u ah arrimaha geedisocodka dib-u-eegistadastuurka.
Arrimaha u baahan wadaxaajoodyada siyaasadeed si loogu daro dastuurka ayaa waxaa loga doodidoonaa banbax howled ballaaran oo ay wasaaraddu la yeelandoonto golahawasiirada si aragti midaysan loogayeesho.
Wasiirka Maaliyadda oo Senatarada u sheegay in sharciga iibka Qaranka uu yahay midka maalgashi loogu soo jiidi karo dalka
Senatar Deeqa Xasan “Canshuurta furdooyinka waxaa ay noqon kartaa mid cayiman iyo mid qiimo ku saleysan”